Iqela le-R & D-Wavelength Opto-Electronic
I-Wavelength inabasebenzi abangaphezu kwama-400, kuquka i-78 technician kunye neenjineli, phakathi kwazo kukho oogqirha be-4 kunye nabaphathi be-master degree ye-11.Kukho kwakhona abasebenzi be-40 baphesheya basebenza e-Wavelength Singapore kunye neeofisi zaphesheya kwezilwandle eKorea, eJapan, e-Indiya, e-USA njalo njalo.
Amaziko e-R&D eWavelength abandakanya: igumbi le-R&D elibonakalayo, igumbi le-R&D le-electromechanical, igumbi le-R&D lesakhiwo, igumbi le-R&D lesoftware, igumbi le-R&D lemveliso entsha, isebe leR&D laphesheya, kunye neziko lenkxaso yobugcisa behlabathi.
Iziko le-Wavelength R&D liziko lobuchwephesha bobunjineli, iziko letekhnoloji yeshishini kunye nesikhululo sokusebenzela esivunyiweyo sisixeko saseNanjing.Iziko le-R&D ligxile kwi-laser optics, kwi-infrared optics, kwizisombululo ze-opto-mechanical, uyilo lwesoftware, ukuvuselelwa kwamandla, njl.njl. Kule minyaka idlulileyo, iziko le-R&D liye lagxininisa "kumema, phuma", kwaye uye wamema ngokulandelelana inani lamazwe angaphandle. iitalente eziphezulu ukusebenzisana kunye nokukhokela, kunye nokudlulisela impumelelo yezenzululwazi nethekhinoloji kumashishini anxulumeneyo.Itekhnoloji yoyilo lwe-optical yeziko ikhokela kweli lizwe, ibonelela ngezisombululo zoyilo olubalaseleyo kumaziko amakhulu ophando kunye namashishini, kunye nokubonelela ngezisombululo ezicwangcisiweyo kubathengi.
Iinkokeli zeqela le-R & D
Isidanga, iYunivesithi yaseZhejiang
EMBA, kwiYunivesithi yeSizwe yaseSingapore
UGqr. Charles Wang
Inkqubo yetalente ephezulu yeNanjing
Ph.D, iShanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences
Umphathi weziko leMicroelectronics, iTemasek Polytechnic
UGary Wang |
USekela Mongameli weR&D
Master, iYunivesithi yaseNanjing yeSayensi kunye neTekhnoloji
Amava omsebenzi kwishishini elikhulu lomkhosi
IiMasters, iYunivesithi yaseHuazhong yeSayensi neTekhnoloji
Amava omsebenzi kwinkampani enkulu yezizwe ngezizwe kwi-R&D yokwambathisa optical
Amava omsebenzi kwinkampani enkulu ye-optoelectronic
UMlawuli weNkqubo yeMveliso
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava kumatshini ochanekileyo we-optics
Amava omsebenzi kwinkampani enkulu yamehlo